जमुनाले खुलाइन् एनआरएनए अध्यक्षमा उठ्नुपर्ने कारण
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदका लागि जमुना गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन्। वर्तमान कार्यकालमा आइसिसी सदस्य रहेकी गुरुङले बिहीबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफू अध्यक्ष बन्नुपर्ने विभिन्न कारण समेत प्रस्तुत गरेकी छन्।
विगत चार वर्षदेखि आफू एनआरएनएसँग सम्बद्ध रहँदा संस्थाको अवसर र चुनौतीलाई राम्ररी नियाल्ने मौका पाएकोले ती चुनौती समाधान गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
उनले एनआरएनएको नेतृत्वमा जानु पर्नाका ११ कारण प्रस्तुत गरेकी छन्। जसमा उनले ‘भिजन २०२०’ लाई पूरा गर्नदेखि लिएर एनआरएनले थालेका ठूला परियोजनाहरुलाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि पनि आफ्नो नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
एनआरएनएका वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेकी पत्नी जमुना गुरुङले अष्ट्रेलियाजस्तो प्रतिस्पर्धी समाजमा आफूलाई महिला उद्यमीका रुपमा उभ्याउन सफल भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो उम्मेदवारीलाई संकीर्ण आँखा नहेर्न पनि आग्रह गरेकी छन्। ‘मेरो उम्मेदवारीलाई एउटी नेपाली नारीले संस्थाको नेतृत्वका लागि देखाएको सकारात्मक पहलका रुपमा हेरिदिन अनुरोध गर्छु,’ गुरुङले भनेकी छन्।
एनआरएनएमा आफ्नो नेतृत्वका लागि गुरुङले प्रस्तुत गरेका कारणहरुः
१. गैरआवासीय नेपालीहरुको माग र अपेक्षालाई पूरा गर्न
२. गैरआवासीय नेपाली संघका मुख्य स्टेकहोल्डरहरुको विश्वास र अपेक्षालाई निरन्तरता दिन
३. महिला सशक्तीकरण र सहभागितालाई संस्थाको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित गर्न
४. गैरआवासीय नेपाली संघलाई सापेक्ष परिवर्तन र विकास गर्दै सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अन्र्तगत चुस्त र सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न
५. गैरआवासीय नेपाली संघलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक स्तरमा अझ पारदर्शीरुपमा विकास गर्न
६. एनआरएनएले निर्माण गरिरहेका मेगा परियोजनाहरुलाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गराउन
७. संस्थाको मार्गदर्शक दृष्टिकोण ‘भिजन २०२० एण्ड वियोण्ड’लाई सफल कार्यान्वयन गराउन
८. एनआरएनएका हरेक एनसिसीलाई आर्थिक कुटनीतिकको भूमिका निर्वाह गर्न र नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा इटा थप्ने काममा प्रोत्साहित गर्न
९. नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थासँग संघले गरेको सम्झौलाई कार्यान्वयन गर्न
१०. वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा खासगरी मध्यपूर्वका महिला श्रमिकवर्गको हितमा बढी केन्द्रित हुन
११. गैरआवासीय नेपाली संघको दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्न
प्रकाशित 2017-10-12 15:21:47